Ac Fan, Fan Qaboojiyaha Ac, Fan Ec, Taageeraha Qaboojinta Dc, Taageerada Ac Axial - Xawaare
Ilaalada Farta Birta
Ilaalada Farta Balaastikada
Qalabka Caafimaadka iyo Nadaafadda
SOO SAARKA ALAABADA
SD02007 Tayada Sare 20x20x7mm axail Fan 12V 5 ...
SD07025 70x70x25mm 70mm 7cm 12V DC brushless c ...
SD09232-1 92mm 12v 24v 48v dc motor fan fan 9232 90 ...
SA22580-1 230V AC Ventilat Warshado aan awood lahayn ...
2020 qiimaha jumlada 70mm Ec Fan - EC FAN SE17 ...
Fan Waxqabadka Sare Sida Ac - SA18060 indust ...
Waxaa naga go'an inaan horumarinno, soo saarno oo aan iibino waxqabad sare, tayo la isku halleyn karo iyo badeecado qiimo ku tartamaya dhammaan macaamiisheenna.
Waxyaabahayagu waxay ka gudbeen shahaadada amniga caalamiga ah ee dalal iyo gobollo kala duwan sida: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS ， iwm.
Waqtigaan la joogo, waxaa jira in ka badan 200 oo shaqaale, aagga dhirta waa 8,000 oo mitir murabac ah, iyo awoodda wax soo saar sanadle ah waa ilaa 6,000KPCS.
Speedy had iyo jeer waxay dhageysataa macaamiisheeda horumar joogto ah, hal-abuurnimo, iyo soo saarid alaab cusub.
Shenzhen Speedy Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2003. Waxay hadda ku taalaa Dhismaha 6, Aaga Warshadaha ee Juntian, Tuulada Shahu, Magaalada Pingshan, Degmada New Pingshan, Shenzhen. Shirkad iyo shirkad soo saare wax iibin leh oo leh aag ka badan 10,000 oo mitir laba jibbaaran iyo in ka badan 400 oo shaqaale ah.Maamulka shirkaduhu wuxuu ka gudbay shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO-9001 (2008).
Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista taageerayaasha qaboojinta DC, taageerayaasha qaboojinta AC, iyo hiitarada kumbuyuutarka. Shayga ayaa ku haboon qalabka, mashiinada iyo qalabka, kumbiyuutarka kumbuyuutarka, korantada korantada iyo kaarka sawirada ee u baahan kuleylka kuleylka ama hawo qaadista. Alaabtu waxay dhaaftay Rohs, CE, UL, CUL, TUV, FCC, CCC, CQC iyo shahaadooyin kale, badeecadaasna waxaa loo dhoofiyey dal iyo dibad.
Xakamaynta tayada iyo horumarinta wax soo saarku waa aasaaska moodeelka ganacsi ee Speedy. Speedy had iyo jeer waxay dhageysataa macaamiisheeda horumar joogto ah, hal-abuurnimo, iyo soo saarid alaab cusub. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan siino xalka ugu fiican ee qaboojinta dhamaan macaamiisha.
Codsiga warshadaha iyo kala soocida taageerayaasha qaboojinta warshadaha
Waa in la ogaadaa in aanan ka wada hadleynin taageerayaasha warshadaha alaabada la soo saaray (sida qaboojinta iyo hawo qaadashada ...)
Faahfaahin kooban oo ah taageere EC ah
EC fan waa shey cusub oo ku jira warshadaha taageereyaasha. Way ka duwan tahay taageerayaasha kale ee DC. Uma isticmaali karto oo kaliya isticmaalka korantada DC, laakiin sidoo kale AC danab p ...
Farqiga u dhexeeya taageere AC iyo taageere DC
1. Mabda'a shaqada: Mabda'a shaqada ee marawaxadda qaboojiyaha DC: iyada oo loo marayo korantada DC iyo soosaarida elektromagnetic, tamarta korantada ayaa loo beddelaa ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Alaabada Featured - Khariidadda bogga
12cm Ac Axial Fan, Ilaalada Fan caaga, Hvac Fan Puller, Taageerada Birta solay 80mm, 172mm Ac Axial Fan, Ilaalada Fan Birta,